Axmed Madoobe oo ka hadlay fashilka Shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay Farmaajo - Awdinle Online
Axmed Madoobe oo ka hadlay fashilka Shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay Farmaajo
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay Shirka natiijo la’aanta kusoo dhamaaday ee Magaalada Dhuusamareeb iyo shirarkii horay u dhacay iyo sidoo kale mowqifkiisa ku aadan arrimaha taagan.
Axmed Madoobe oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlay shirarkii ka dhacay Dhuusamareeb ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka, arrimaha gobolka Gedo iyo khilaafka xoogeysatay ee u dhaxeeya Jubbaland & Dowladda federaalka.
Waxaa uu sheegay in markii uu shirka Dhuusamareeb u furmay uu ka dalbaday madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland inay shaaciyaan qodobada laga hadlayo maadaama kulanka ay iyaga soo codsadeen, isla markaana ay ka codsadeen in la xaliyo qodobo dhowr ah oo caqabad ku ah shirka dhuusamareeb.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in ay sidoo kale Shirka dhuusamareeb uga hadleen doorashada Xildhibaannada Gobolada Waqooyi ee Soomaliland kala hadleen Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ay taleefoon ka waceen si looga heshiiyo arrintaasi oo uu sheegay in Guddi loo saaray.
Arrimaha Goblka Gedo ayuu sheegay in loo xil saaray Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle, sidoo kalena Jubbaland loo ogolaado in duqa degmada Garbaahaareey ay soo Magacaabto guddiga doorashooyinkana u dirto Gedo, hayeeshee qorshahaay ay ka baxeen Madaxda dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa uu nasiib darro ku tilmaamay in Madaxweyne farmaajo uu iksu kobo sheegashada hal degmo oo ay Reerkiisa degan yihiin, isaga oo sheegay in an lagu aamini karin dagaalka, waxana uu si cad u sheegay in dowladda ay maalin walba hub & Ciidan ay kusii daabuleyso Gobolka Gedo.
Previous articleUrurada Bulshada Rayidka oo qoraal digniin ah soo saaray
Next articleXOG: Beesha Caalamka oo soo faragelisay fashilka ku yimid Shirka Dhuusamareeb